Isikolo lixesha elihle. Isikolo asikho izifundo kuphela, umsebenzi wesikolo, kunye nezinye iinkxalabo zesikolo. Kwakhona i-adventure edizayo, abahlobo abatsha, uthando lokuqala. Isikolo akufanele sikulungelele kuphela kwimathematika, kwi-physics nakwezinye izifundo, kodwa nakwiindawo zonke, kuquka ukuzenzela kunye nekhwele. Kule nqaku, siza kuthetha malunga nokwenza izicwangciso kunye neenwele ze sikolo kwimihla ngemihla kuya kuba bhetele ngakumbi.
Kukho ixesha elincinci, kufuneka ubalekele esikolweni ngemizuzu eyi-10, kwaye awukazanga ukucinga ukuba uza kujonga njani namhlanje. Nantsi olu luncedo luza kunceda, oluya kukuxelela ukuba ziphi na izicwangciso zokubumba kunye nezakhe zezinwele zesikolo ngamnye ngosuku. Enyanisweni, kungcono ukuziqhelanisa kwangaphambili, umzekelo, ngeveki okanye emva kwesikolo, ukuze ungachithe ixesha elide uphinde usebenze imizamo yakho yokujonga kakuhle.
Okokuqala, uzimisele ukuba ufuna ukuzenza? Emva koko, kwiminyaka yesikolo, isikhumba sisaselula, sigcwele amandla amaninzi, njengenkosikazi yakhe kunye nokutshatyalaliswa kwayo kunye neendlela zokuzicoca. Ukuba unempilo enhle, ulusu olucocekileyo kunye nomthunzi omhle wendalo, ke ungayigubungela ngeendlela ezahlukeneyo zetayal, okanye powder. Yisebenzise ngakumbi i-creams eyahlukeneyo yesikhumba esincinci esiya kuyondla, isondeza ngamavithamini. Ukuba ngokukhawuleza unqume ukufihla ingxaki yesikhumba, ngoko kulungele ukusebenzisa izimonyo kwesikhumba sengxaki, okanye okhethekileyo kubaselula. Ungakulibali ukusebenzisa i-concealer ngaphambi kokusebenzisa i-toning ithetha-le nto yinto ekhethekileyo eluncedo ekufihla izibonda ezimnyama phantsi kwamehlo, kunye nokungafezeki kweekhumba ezahlukeneyo, ezifana nezibonda okanye ukuhlengahlengiswa kwesikhumba. Ngoko, sebenzisa i powder okanye isiseko kunye ne-puff ekhethekileyo okanye isiponji. Ukushiya i-gap efanelekileyo. Ndiyathetha, ngokusebenzisa le mali, jonga ukuba wenza ntoni ngokuthe ngqo. Ukuba kukho izikhewu kwindawo ethile, okanye ngokuphambeneyo, inani elincinci lepowder, ukulungisa ezi mpazamo, awuyi kuchitha ixesha elide kulo, kodwa ngenxa yoko akukho mntu uya kuzibona, kwaye awuyi kubukeka njengesidenge ongazi ukusetyenziswa kwendlela yokwenza.
Emva koko, kufuneka ugxininise iinki, umlo kunye nombala. Nantsi into ephambili ayiyikuyidlula. Ukwenza oku, thatha izithunzi zamnyama okanye ezimdaka, okanye uzame ukuthabatha izithunzi phantsi kombala weenki. Emva koko thabatha ibhontshi elincinci kwaye ubeke isithunzi phezu kweelishi uze udibanise ngokucophelela.
Uyakufuna kwakhona izithunzi zamehlo, ngokukhethekileyo amathoni e-pastel. Faka isicelo ngokucacileyo izithunzi ezisehlokweni eliphezulu kwaye uzifake umthunzi. Amehlo akho acatshulwa, uphawu lokugqibela luye lwashiywa - i-eyelashes. Thatha i-mascara efanelekileyo kwi-taste-extending, for volume or hypoallergenic. Ukugquma i-eyelashes kwiingcambu ukuya kwiingcebiso, zidwebe ngezinye iibrashi, qinisekisa ukuba akukho ziqhumane zomzimba kwi-eyelashes. Ukugqiba i-makeup, thabatha isicwecwe esilula okanye esobala, kwaye usebenzise inani elincinci emlonyeni. Yonke into yokwenza isikolo ikulungele.
Ukwenza ikulungele, kodwa kuthiwani ngekhanda? Ngoku siza kukhetha iindlela ezininzi ezifanelekileyo zesikolo ngamnye ngalunye. Izinwele ezilungileyo, ezilungele kakuhle ziyinto ebalulekileyo yeyona ntombazana. Izinwele azilungele kakuhle, iinwele ziyabonwa ngokukhawuleza. Ngoko musa ukuvumela iinwele zakho zibe zimo ezimbi, zihlale zihlambulukile. Ukuba iinwele zakho zinyuka kwaye zahlukana, zama ukuzomisa ngaphantsi ngesomisi zentliziyo, kwaye usebenzise iimaski ezincinci eziphuculisayo kunye nokunyuka kwakho ukutyelela i-hair, ibe neenwele zakho ziphilile. Kwakhona qaphela ukuba awufumani i-dandruff. Emva koko, i-dandruff ayikho uphawu oluphilileyo.
Ukwazi ukuba iinwele zakho zisesimweni esifanelekileyo, zibukeke kakuhle zifanelekile ukuba ucinge ukuba luphi uhlobo lwezinwele ezenza namhlanje esikolweni. Ngokuxhomekeka kubude beenwele, unokukhetha i-styles ehlukeneyo yezinwele ze-styles, kuba umsila oqhelekileyo kunye neenwele eziqhelekileyo mhlawumbi sele utyumbile.
Ngeenwele ezinde, i-pigtail ifanelekile. Kukho iintlobo ezininzi zeebhondi, zenziwe zimbini, ezintathu, ezintlanu, ezintandathu okanye ngaphezulu. Zingenziwa njenge-Afrika encinci ininzi kwi-intloko, enye okanye ezimbini. Kubukeka buhle kwaye bugqibelele esikolweni imihla ngemihla ye-pigtail spikes, i-pigtail "umsila weentlanzi" okanye i-French braid. Ukuze wenze oku, khetha apho uza kululeka khona: emva kwekhanda, ukuqala kwisithsaba okanye kwenye indawo kwicala. Emva kokukhetha indawo, goca iinwele uze uwahlule emacaleni amathathu. Ukongezelela konke akunzima kakhulu. Qala ukukhwela, njengesiqhelo esivamile, kodwa ngelo xesha udibanise iinwele ezongezelelweyo, kwinqanaba elincinci kwaye ngakwesobunxele, ngoko kwicala lasekunene. Emva kokuba uqedile ukugqoka i-braid, ubophe ekugqibeleni kunye ne-band elastic okanye isikhumba seenwele, usishiye nje ukuhla emqolo wakho, amahlombe, okanye unokuwuguqula njengegobolondo uze uyilungiselele kule ndawo ngeentsimbi zesikhumba, okanye ngezinye iincinci zentloko. Le yekhwele yinto ekhethekileyo kwaye ibukeka ilungile, kwaye iinwele aziphazamisi yonke imini. Kwakhona, i-braid ingabhalwa kwintloko, eya kubonakala ijongwe.
Iintswele eziqhelekileyo eziqhelekileyo zihlala zihlotshiswe ngezixhobo, eziza kukunika ubuhle. Ngenxa yale nto unako ukuhlala usebenzise iiplanga ezihlukeneyo kunye neenwele zeenwele. Ukwenza ukuhlukana kumacala amaninzi, nokulungisa iinwele ezahlukeneyo zeenwele, uya kujonga imihla ngemihla ngendlela entsha. Nangona unako ukwenza iipopu, kuya kwenza ukuba ukubonakala kwakho kube ngumdlalo omncinci, ngenxa yokuba amantombazana athobileyo ahlala ebonakala engenangqiqo kwaye engalindelekanga.
Ixesha lokugqibela liba lifashini lokwenza "i-gulk" enjalo. Akunzima kakhulu ukwenza. Khetha apho uthanda indawo yakhe. Uqokelela izinwele kumsila kunye neenwele zomoya ezinqabeni ze-elastic. Yonke into, kwaye ilungile! Njengesiqhelo, unako ukunceda iziphambano zeenwele ezinemihlobiso okanye nawaphi na amacwecwe ezinwele zokuhlobisa i-bun. Oku kuya kwandisa njengenjabulo kwiinwele zakho, kwaye akuyi kubukeka bubuhlungu, ngoko kuya kuhlaziywa ukuba izolo nawe wenze i-bun.
Xa ungeke ukhululekile ukuhamba ngeenwele ezivulekileyo, kwaye kulula ngakumbi ukuba wenze umsila, ungadikibali. Nangona umsila oqhelekileyo unokwenziwa kakuhle, ukwenzela ukuba uya kuxabiswa kwaye uza kukuvuza ngokuncoma. Ukwenza oku, hlawulela iinwele kwi-msila ephezulu kwi-vertex uze udibanise iinwele phezu kobude obude ukusuka emsila. Kwakuhle kakhulu. Kwaye ukuze ungaboni izinwele zezinwele, ukhethe enye incinci yeenwele uze uyigubungele ngokupheleleyo ngebhanki e-elastic. Ngoko iinwele zakho ziyakubonakala ziphelele, kwaye i-elastic will not stand out.
Yiyo yonke into esifuna ukukuxelela ngesihloko: "Yenza i-styles and styles for school for every day." Ndiyathemba ukuba ezinye iingcebiso zethu ziyakunceda ukhangele yonke imihla ngendlela entsha. Into ephambili - khumbula: kungakhathaliseki ukuba awujonga njani imihla ngemihla, ungalibali malunga nezifundo zakho. Inhlanhla esikolweni!
Ulwandle lonxweme kunye nesicelo sayo
Iimfihlelo zobuhle bamakhosikazi: isitayela, umfanekiso kunye nefashoni
I-Recipe ye-Vitamin Beverage ukusuka kwi-pepper e-sweet, cilantro
Umyeni ka Xenia Borodina waphinde wahlazisa, isithombe
Umdaniso waseSirtaki - umoya waseGrisi ekhaya lakho